Modalisma - Wikipedia
Ny modalisma izay atao hoe koa sabelianisma dia firehana teolojika kristiana izay mampianatra fa ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia fiseho samy hafan'ny persona tokan' Andriamanitra fa tsy persona telo akory. Iray amin'ireo endriky ny monarkianisma (na monarsianisma) ny modalisma. Izany dia nampianaran'i Sabelio tao Roma tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-3.
2 Ny fampianarana ny modalisma
3 Ny fanamelohana ny modalisma
4 Ny modalisma amin'izao fotoana izao
Ny teny hoe modalisma dia fanagasian-teny avy amin'ny teny latina hoe modus izay midika hoe "fomba" na "fomba fisehoana" ary ny hoe sabelianisma dia avy amin'ny anaran'ilay pretra sy teolojiana atao hoe Sabelio na Sabeliosy (latina: Sabellius).
Ny fampianarana ny modalisma[hanova | hanova ny fango]
Tsy mampiasa ny teny hoe pesona i Sabelio raha miresaka ny amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izay inoan'ny fiangonana ofisialy fa miray fomba (na fiziana na natiora na sobstansa) ao amin'ny Trinite.
Amin'ireo midalista dia tsy persona telo ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fa fomba fisehon'Andriamanitra ka ny Ray no persona tokan'Andriamanitra. Araka io fampianarana io dia manondro an'Andriamanitra izay tonga nofo tao amin'i Jesosy ny teny hoe Ray sy Fanahy Masina.
Ny teny hoe Ray sy Zanaka, hoy ireo modalista, dia ampiasaina mba hanavahana ny fihoa-drahan'Andriamanitra sy ny fahatongavany ho nofo. Satria fanahy Andriamanitra dia tsy tokony ho heverina ho zavatra mahaleo tena hafa ny Fanahy Masina fa fomba fisehon'Andriamanitra miasa.
Mino ny maha Andriamanitra an'i Jesosy ny modalisma sady mino fa fisehoan'i Iahveh, ilay Andriamanitra resahina ao amin'ny Testamenta Taloha, mitafy nofo, ka noho izany dia tokony hivavahana araka ny fivavahana amin'Andriamanitra tokana i Jesosy.
Ny fanamelohana ny modalisma[hanova | hanova ny fango]
Niely tany Kirenaika ny hevitr'i Sabelio ka izany no nahatonga an'i Demetriosy (na Demetrio), patriarkan'i Aleksandria, hanoratra taratasy hanoherany ilay fampianarana. Notsipahina tamin'ny konsily tao Roma tamin'ny taona 262 ny sabelianisma.
Ny modalisma amin'izao fotoana izao[hanova | hanova ny fango]
Ny Pentekotisma apostolika, izay ahitana Fiangonana maromaro, dia mampianatra ny modalisma. Rehefa manao batisa izy ireo dia tsy mampiasa ny anaran'ny persona telon'ny Trinite (Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina) fa ny anarana hoe Jesosy dia ampy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Modalisma&oldid=972018"
Voaova farany tamin'ny 8 Jolay 2019 amin'ny 04:57 ity pejy ity.